Tora-bato avy any an-danitra. | mandimby maharo
Posted on 16 March 2015 by Mandimby Maharo
“Tora-bato avy any an-danitra ka na nahavoa ary dia azo avadika ho vato fototra”: Izay no azo amintinana ny foto-kevitra iainan’ny rehetra eto Dago amin’izao fotoana izao. Maty lolo amin’ny fifidianana izay tsy ho marina dia mihazakazaka manangana HVM manerana an’I Madagasikara. Soa fa nisy traboina ho vidina, soa ihany fa miakatra ny vidim-bary (1900 ariary!) afahana manao asa soa. Ka mba rehefa manolotolotra 3 kapoaka isan-kerinandro mandrapahatonga ny volana jolay dia mety mba hahazo vato ihany. Soa ihany fa tsy nanao lalana ny tetezamita ka mba misy ho lalorana simenitra sy tsetsenana vatokely, mba ho hita fa mitsinjo ny mponina ny fanjakana foibe sy ny antoko HVM. Soa fa nisy vatobe nandondona ka ahafahana mampiseho fa mitsinjo ny vahoaka sy ny fananany ny mpitondra ka mba adinodino ny dahalo any Atsimo sy ny vaki-trano eny Itaosy. Soa fa nisy mpitokona teny Antaninarenina ka mba nahafahana nampiasa ny tahiry tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso. Soa ihany fa mahay miady tombotsoa ny solombavam-bahoaka ka adinodino fa ho laniana eny Tsimbazaza ny sata manokana, hanomezana toerana ny antoko HVM any anty ny filan-kevitry ny tanana sy ho ben’ny Tanana Lefitra, eto Antananarivo Renivohitra.
Fa etsy ankilany koa, soa ihany ary fa voadidina mpanolo-tsaina katraka ny filoha ka nandrara ny mpanohtra (hono) tsy hanampy ny traboina, ka ahafahan’ireto farany milaza fa izy ireo dia mandaka ny fihavanana Malagasy. Nefa izy ireo dia mandà ny handray anjara amin’ny fampihavan-pirenena. Soa ihany koa fa nanadino ny fanasana ny tao amin’ny Ffkm tamin’ny fihaonam-be ka ahafahan’ireo mpingerongerona nefa tsy nahavita milaza fa tsy izy io fampihavanana io fa ny heviny, izay mbola tsy nampiharina, no tena mahadika ny tena fapihavanana. Soa ihany koa fa norarana tsy hiteniteny ny any Faravohitra ka ahafahan’ireo tompo menakeliny mialokaloka ao an-dapa ka mitsetsitra izay maminy aloha mandrapaha… indray.
Ambon’izay, soa ihany fa nisy ny tondra-drano mba ahafahanay ety ambany Tanana mba mahazo fanampiana na dia ny sitraponay no te hipetraka eny ambony lakan-drano. Soa ihany fa nampiharina ny lalàna namaritra fa tsy azon’ny fiarabe ivezivezena aty an-tanana amin’ny atoandro, ka ahafahanay mampiakatra ny vidin’entana. Soa ihany fa ho avy ny fifidianana ka matahotra ny mpitondra ny handroaka anay tsy hivarotra any ampovoan’arabe.
Tags: Antananarivo, FFKM, Madagasikara, politique, RajaonarimampianinaCategories: Actralité, politique